Ahoana ny fandidiana SEO manerantany?
Ny tanjon'ny lehibe indrindra amin'ny tompon'ny tranonkala dia ny manolo-tanana amin'ny mpihaino iraisam-pirenena ary manitatra ny fanatrehany eo amin'ny aterineto. Ny fahafahana tsara indrindra hampiroboroboana ny orinasanao an-tserasera manerana izao tontolo izao dia ny fametrahana ny dingam-panavaozana manerantany. Izany dia manome fomba mahomby hampitomboana ny mpihaino anao ary hahatratra ny tsena vahiny.
Maro ireo singa tokony horaisinao ho dinihina amin'ny tetikady SEO manerantany. Zava-dehibe ny hahatakatra ny zavatra ilaina mba handaminana ny loharanon-karenao ary hanangana tetikady amin'ny fotoana sy ny fepetra takiana.
Eto amin'ity lahatsoratra ity, isika dia handeha amin'ny dingana fototra fototry ny dingan'ny fikarohana ara-tsosialy eran-tany - achautudo information.
Toro-làlana SEO manerantany
Tokony hanomboka tsena feno fikarohana. Hanampy anao handinika ny mety ho an'ny tsena iraisam-pirenena izany ary hanome fahafahana anao hametraka ny lasibatra.
Mila mamantatra ny toe-javatra iainanao amin'izao fotoana izao ianao ao amin'ny tsena an-tserasera, jereo ny habetsahan'ny traikefa azonao avy amin'ny firenena samihafa sy ny tahan'ny famadihana anao.Miaraka amin'ny fanampian'ny Google Analytics, azonao atao ny manamarina hoe avy aiza ny fifamoivoizana avy amin'ny fanjakana sy ny fiteny tsirairay amin'ny tranokalanao. Ankoatra izany, zava-dehibe ny mahafantatra izay teny fikarohana izay nahatonga ny fisehoana fikarohana sy ny fitohanana fifamoivoizana ho an'ny tsena iraisam-pirenena voamarina. Mila mandinika ny sivana ianao ary ny fiovan'ny tranonkala mpitsidika izay avy amin'ny tsena iraisam-pirenena faran'izay ambony. Ireo angona ireo dia mety hitanao amin'ny tatitra geo eo ambanin'ny sehatry ny mpanatrika. Ity hatsaran-toetra ity dia hanampy anao hamantatra ireo tsena iraisam-pirenena manerantany izay ahafahanao mampandroso ny asanao na ny vokatrao ary jereo ny fitondrantenan'ny mpitsidika tranonkala iraisampirenena anao amin'izao fotoana izao.
Fikarohana karoka fikarohana iraisam-pirenena
Teo amin'ny dingana faharoa raha efa nanavaka ny firenena ambony ianao ary nihevitra ny tsenanareo tanjona, manombana ny mety ho an'ny firenena rehetra. Mba hahatratrarana ny mety aminao dia mila manao fikarohana ianao. Mila mitady teny filamatra mifanaraka amin'ny fangatahan'ireo mpitsidika tranonkala ivelany ianao. Ankoatr'izay, mila manombana ny volavolan-karoka fikarohana momba ireo karoka fikarohana ireo ianao ary ny fifaninana eo amin'ny tsena vahiny. Ny fampahalalana momba ny fialan-tsasatra misy anao amin'izao vanim-potoana fikarohana izao dia hanampy anao hamantatra sy hanatsara ny fitadiavana karazam-pikarohana mikarokaroka. Mba hahazoana io angon-drakitra sarobidy io dia azonao atao ny manatanteraka ireto fitaovana manaraka ireto: Semalt Auto SEO, Google Planter Keyword Planer na SimilarWeb.
Noho izany dia nahazo fampahalalana momba ny fikarohana ianao izay avy amin'ny firenena sy vahiny Mahazoa fifamoivoizana organika ary inona no dikan'ny mpanjifa iraisam-pirenena mba hahitana ny tranokalanao. Ankehitriny, izao no fotoana hamaritana ireo firenena izay tsy ampy ny fikarohana. Azonao atao koa ny mifantoka amin'ny fiteny raha mahita ianao fa ambany ny volan'ny fifamoivoizana rehefa manombana ny tsena vahiny tsirairay. Izany dia ahafahanao mahazo ny fifamoivoizana manerantany avy any amin'ny tsena iraisam-pirenena rehetra ary mifindra mankany amin'ny fomba fiasa mifanentana amin'ny firenena.